Prova per a persones
Misy lafiny efatra miavaka azontsika handinihina ny zioga tsy antonona : ny fanambadiana, ny varotra, ny fivavahana ary ny fanaovana asa soa. Ndeha hojerentsika voalohany indrindra ny momba ny zioga ao an-tokantrano na ara-panambadiana. Mitovy amina ondrivavy iray sy osilahy iray mifamatotra izy ireo : ilay ondry maniry fatratra ny ahimaitso, ary ilay osy kosa anefa tsy maniry afa-tsy ny hiroaka ny tsilo mandrobona eny amoron-kady.
Mazàna dia ilay osy no mahatratra ny tanjona nokendreny. Saiky ny lehilahy na vehivavy tia izao tontolo izao no mandrakariva mahasarika ilay iray. Vidiana lafo tokoa ny fanomezana vahana ny fihetseham-po maha olona, na ny fahazoana tombontsoa kely mielina. Ampy tokoa ny mivesatra faty iray, ka tsy tokony hampiana iray faharoa izany. Mihazakazaha toy izany mba hahazoanareo. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo.
Tsy resaka fahavelomana na famonjena no lazaina eto, fa resaka hazakazaka eo an-kianja ; mihazakazaka mba hahazoana loka, tsy hoe mba hahazoana ny fiainana tsy akory, fa satroboninahitra tsy mety ho lo. Mazava ho azy fa efa manana ny aina aho vao hanomboka hihazakazaka, koa tsy ho very izany aina izany, na dia tsy afaka handrombaka ilay satroboninahitra nampanantenaina aza aho ; satria tsy ny aina tsy akory no hatolotra ho loka. Io fiainana io dia omena tsy misy fepetra.
Eto ihany koa dia tena mbola mampalahelo ny fiantraikany.
mampiaraka tovovavy isa akaiky Tuamasina Madagaskar?
Les actualités à Madagascar du Mardi 18 Juillet .
Matraquage : Un fait qui conforte la culture de la médiocrité.
Tsy maintsy ho izany rahateo no izy. Olon-droa no nikambana mba hiaina fifandraisana akaiky dia akaiky sy am-po lalina indrindra, kanefa na ny zavatra tiany, na ny fahazarany, na ny fihetseham-pony, na ny faniriany, na ny mahasarika azy sy ny tanjona tratrariny dia mifanohitra tanteraka. Tsy misy na inona na inona iraisany, hany ka mifandona hatrany izy raha vao mihetsika kely. Samy mahalala isika, indrisy!
Izany no mitranga matetika dia matetika. Indrisy anefa! Tsy ela dia mahiratra ny maso momba ny tena zava-misy. Fahatsapana mampihoron-koditra! Iza no afaka hanoritsoritra izany rehetra izany? Minoa ahy fa vantany vao manao io dingana io ianao, dia ho hitanao fa hifanehatra amina nenina feno hakiviana ny fonao, ary ny fiainanao hahita alahelo mangidy tsy hita isa.
Resaka momba ny fitiavana efa tafiditra lalina ve? Resaka momba ny tombontsoanao ve? Eto rahateo dia ny tombontsoanao mandalo no voakasika fa tsy izay maharitra mandrakizay. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino, ka mety mitoetra aminy ihany ny lahy, dia aoka tsy hialany izy. Fa ahoana moa no ahafantaranao, ravehivavy, na hovonjenao ny vadinao, na tsia?
Ary ahoana no ahafantaranao, ralehilahy, na hovonjenao ny vadinao, na tsia? Hihomehezana ny hevitra toy izany, satria hampandamoka tanteraka ny zavatra hatao. Ny kristiana mifanaraka amina tsy mino dia hitoetra hatrany ao anaty toerana tena manahirana. Izay no mahatsotra ity resaka ity. Izany no foto-kevitra tsy azo dikaina raha tsy tiana ho simba ny fijoroana ho vavolombelona sy ho very ireo fitahiam-panahy.
Mandreraka ny fanoherana tsy mitsahatra toy izany. Fandrika ratsy tokoa izany.
Tsy hay hatao mihitsy tokoa mantsy izany. Mialà teo, eny fa na dia mampanantena vola an-tapitrisa ho anao aza izany fiaraha-miasa izany. Hilentika anatina lalan-tsarotra sy fahoriana tsy misy fahataperany ianao. Mifanohitra tanteraka ny foto-kevitra, ny antony, ny tanjona sy ny fanantenana manetsika anareo. Ahoana no hanananareo zavatra hiombonana?
Tahaka ny taranany an-jatony taona an-dàlam- pahatapitry ny tariby, io "andro maraimbe Abelisaurus " io dia niavaka tamin'ny haben'ny fahatahorany farafaharatsiny ho an'ny fari-pitsipika antenantenany Jurassic sy ny fitaovam-piadiana tsy fantatra anarana, izay azo antoka fa mbola nanampy tanjona tena ilaina. Eocarcharia teny grika ho an'ny "antsantsa maraina" ; nanonona ny EE-oh-car-CAR-ee-ah. Tahaka ny efa nieritreretanao azy tamin'ny anarany, Eocarcharia dia mifandray akaiky amin'ny Carcharodontosaurus , ilay "zana-tsindrohan'ny vorona fotsy lehibe" izay nipetraka tany amin'ny faritra afovoan'i Afrikana.
Ekarcharia dia kely noho ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, ary koa nanana onja sy hafetsena hafahafa teo amin'ny masony, izay mety ho nampiasaina hanohanana ireo dinôzôra hafa mety ho firaisana ara-nofo izany, izay midika hoe lahy sy ankizivavy lehibe kokoa vady manana vavy bebe kokoa. Ny fitsaratsaram-poana amin'ny nify maranitra, Eocarcharia dia mpidoroka mavitrika, na dia mety ho lany ho an'ny Carcharodontosaurus aza izany.
Etsy ankilan'izay , io fitsaboana lehibe io dia manamarika tsangambato iray hafa ao amin'ny gorodona dinôzôra Paul Sereno, mpandalina ny paleontologista. Ho an'ireo tsy mahazatra amin'ny fiteny grika, ny anarana hoe Erectopus dia toa somary hafahafa ihany - saingy tsy midika akory izany hoe tsy misy dikany kokoa noho ny "tongotra mahitsy". Ny sisa tavela amin'ity dinôzôro ity dia hita tany Frantsa tamin'ny faramparan'ny taonjato faha, ary hatramin'izay fotoana izay dia nanana tantara sarotra momba ny taxonomia.
Tahaka ny karnavaly mpikaroka mampidi-doza maro, dia nozaraina ho karazana Megalosaurus M. superbus izy io, ary avy eo dia nantsoina hoe Erectopus sauvagei avy amin'ny alemà paleontologista Friedrich von Huene, izay nipoitra nandritra ny taona ho an'ny limos dinosaur - hatramin'ny Naverina naverina tamin'ny taona izy io fa akaiky ny havany akaiky saingy kely ny Allosaurus. Ny Eustreptospondylus dia hita tany amin'ny tapaky ny taonjato faha, talohan'ny nahalalan'ny mpahay siansa ho an'ny rafi-pandaminana dinosaure.
Vokatr'izany dia heverina ho karazan'ny Megalosaurus io fitsaboana io, ary naharitra an-taonany maro ho an'ireo paleontôlôgy no nanendry azy tamin'ny karazany manokana. Hizaha ny tanjon'ny Eustreptospondylus. Tahaka ny fitsaboana marobe fianakaviana be dia be misy dinosaure mitongilana roa, izay ahitana vondrona samihafa toy ny mpandroba , tyrannosaurs , carnosaurs sy allosaurs , i Fukuiraptor dia nanipy nanodidina ny fantsona fanasokajiana hatramin'ny nahitany azy tany Japan.
Tamin'ny voalohany, ny grenady goavam-be misy ny dinôzôra dia tsy fantatra ho toy ny teo an-tongony, ary nosoratana ho toy ny mpaka raptor lova iray izay maharitra amin'ny anarany. Ankehitriny anefa, ny mpino Fukuiraptor dia heverina fa karnosaura, ary mety mifandray akaiky amin'ny iray hafa ankoatra azy, sy ny fampitam-baovao, ny Sinraptor Shinoa. Azo heverina fa nananihany an'i Fukuisaurus ny fukuiraptor , saingy mbola tsy misy porofo amin'izany. Nahoana no "Gasosaurus? Jereo ny profesora iray momba ny Gasosaurus. Raha jerena fa noporofoina tamin'ny fôsily ny porofom-panafody manontolo, dia toa tsy mahagaga raha nanaporofo fa sarotra ny miditra an-tsokosoko ny Genyodectes: ity mpihinam-boanjo ity dia asehon'ireo andian-jiolahimboto tokana, voatahiry tsara, izay tahaka ny nify sandoka goavam-be sarimihetsika ankizy iray.
Hatramin'ny "karazana fôsiliny" notononina, tamin'ny taona , ny Genyodectes dia sokajiana ho tyrannosaur , abelisaur ary megalosaur; Tato ho ato, ny fironana dia ny hampidira azy amin'ny ceratosaurs, izay mety hahatonga azy ho havany akaiky ny Ceratosaurus. Raha tsiahivina, raha jerena ny tantara nopotehiny, dia ny Genyodectes no be mpahalala indrindra Amerikana be mpampiasa indrindra, mandra-pahitan'ireo andian-tantara fôsily be dia be nanomboka tamin'ny taona Ny Giganotosaurus dia dinôzôra iray tena goavambe iray tena goavam-be, somary mitongilana na Tyrannosaurus Rex aza.
Ity toeram-pitsaboana Amerikana Atsimo-Atsinanan'i Etazonia ity koa dia nanana tafika matanjaka kokoa, anisan'izany ny sandry lehibe kokoa misy rantsana telo voapetaka amin'ny tanana tsirairay. Jereo ny 10 momba ny Giganotosaurus. Ity misy lesona Japoney haingana: ilay biby goavambe fantatsika hoe Godzilla dia mitondra ny anarana japoney hoe Gojira, izay endri-tsoratra amin'ny teny japoney ho an'ny trozona "kujira" ary gorilla "gorira".
Araka ny azonao an-tsaina dia lasa mpankafy ny sarimihetsika Godzilla ilay paleontôlôgy antsoina hoe Gojirasaurus taolana tapaka tany Amerika Avaratra. Na dia teo aza ny anarany, dia lavitra ny dinosauro lehibe indrindra hatramin'izay i Gojirasaurus, na dia efa nahatratra ny halehibiazan'ny fotoana aza - raha ny marina, raha pounds dia mety ho iray amin'ireo fitsaboana goavana indrindra amin'ny vanim- potoan'ny Triassic. Hatreto, ny palitao dia nahita ny fôsilin'ny tanora tokana ihany, ka mety ho lehibe kokoa ny olon-dehibe amin'io karazana io na dia tsy dia lavitra loatra aza tahaka ny dinôzôro karnivoraly toy ny Tyrannosaurus Rex , izay tsy dia kely loatra akory Andriamanitrazilla.
Ilokelesia dia iray amin'ireo karazana abelisaurs - dinôzôro-dônôzôma miara-midina sy midadasika midadasika mifandray amin'ny Abelisaurus - izay nonina tany Amerika Atsimo nandritra ny fotoana amn'ny faran'ny Kretacea. Ity mpihinam-boanjo kilao ity dia nivoaka avy tao amin'ilay kitapo miorina amin'ny rindrina am-bavany mihoatra ny habeny ary ny rafitry ny karandohany; Ny havany akaiky indrindra no lehibe indrindra, ary mampidi-doza indrindra, Mapusaurus. Mbola maro ny paleontologista tsy mahafantatra momba ny fifoloran-kevitra ara-evolisiona ao amin'ny abelisaurs ho an'ny fianakaviana hafa ho an'ny fianakaviana, izany no mahatonga ny dinôzôro toy ny Ilokelesia ho lohahevitra momba ny fianarana goavana.
Araka ny mety ho efa fantatrao tamin'ny anarany - "Indianina" - Indosuchus dia tsy fantatra ho dinôzôro raha vao hita tamin'ny , tany amin'ny faritra atsimon'i Inde izay tsy mbola mafana loatra ny dinosaure, na dia ankehitriny aza, fikarohana. Fotoana fohy taorian'izay dia novolavolaina ho toy ny fitsaboana goavana mifandray amin'ny Amerikanina Amerikana Abelisaurus io biby io , ary toy izany koa dia mpihaza iray voatokana ho an'ny kely-be-midina sy ny titanosaur kely avy any amin'ny faritra avaratr'i Cretaceous Afovoany.
Amin'ny maha-spinosaurs - dinôzôra lehibe lehibe sy lohan'akan-doko sy kirokilila - mandehandeha, ny Irritator dia tsy "manelingelina" noho ny an'ny hafa. Nalaza io anarany io, satria io karandoha tokana io ihany no nokasihin-dry zareo tamin'ny plastera avy amin'ny mpihaza fossil, izay nangataka ny paleontologist Dave Martill handany fotoana lava sy feno herisetra.
Araka ny efa fantatrao, ny Irritator dia mifandray akaiky amin'ny mpitsabo any Amerika Atsimo Spinosaurus, ilay dinôzôra lehibe indrindra hatramin'izay - ary mbola mety hiteraka fahazoan-dàlana ho karazana iray hafa an'ny spinosaur hafa Amerikana, Angaturama. Amin'ny lafiny iray, ny anaran'ny karazana Irritator tokana dia "challengeri", aorian'ilay tovolahy tompon'ilay mpanoratra tantara Sir Arthur Conan Doyle The Lost World. Kaijiangosaurus teny Grika ho an'ny zana-kazà Kaijiang ; Nambaran'i KY-jee-ANG-oh-SORE-us.
Kaijiangosaurus dia iray amin'ireo dinosaures izay natolotra ny "fast, but not quite" netherworld of paleontology: ity fitsaboana lehibe ity teknika, karnosaura no hita tany Shina tamin'ny taona , tao anatin'io fananganana io izay nahatonga ny olona fanta-daza kokoa, ary be lavitra kokoa ny anarana hoe Gasosaurus.
Raha ny marina, ny ankamaroan'ireo paleontôlôgy dia mino fa ny Kaijiangosaurus dia karazam-pandrefesana, na karazana iray, an'io dinosaury malaza io izay tsy ara-teknolojika, fa hita nandritra ny lava-pamokarana mamoaka lalana iray na iray hafa. Nahita tamin'ny ny Paul Sereno, mpanao pôlontôla malaza, ny Kryptops dia ohatra tsy dia fahita firy momba ny afovoan-afrikana avaratra technique, abelisaur avy amin'ny vanim-potoana Cretaceous.
Tsy dia lehibe loatra io dinôzôra io, "fotsiny" eo amin'ny 25 metatra ny lavany ary latsaky ny tonony, saingy nanavaka ny hoditra hafahafa izay toa nanarona ny tarehiny mety ho vita amin'ny keratin io zavatra io, toy izany toy ny fantsika olombelona. Na dia teo aza ny endriny nahatsiravina, ny kanseran'i Kryptops, izay somary fohy, dia manondro ny maha-mpangalatra azy fa tsy mpihaza mahery.
Related mpianatra mampiaraka aminny Madagaskar
Tanàna mampiaraka maimaim-poana ao Madagaskar
Hookup izao Antsiranana Madagaskar
Mampiaraka mihoatra ny 50 Madagaskar